KingKong 5 Pro dhul xoog leh, oo leh ismaamul weyn iyo iska caabin | Androidsis
KingKong 5 Pro wuxuu leeyahay dhul xoog leh, oo leh ismaamul weyn iyo iska caabin
KUBOT waa sumad la aqoonsan yahay oo ka mid ah qaybaha aaladaha adag ee mobilada, taasna waxay nagaga yaabisay sannadkan 2021-ka oo leh moodeelkeeda cusub King Kong 5 Pro. Qaar ka mid ah aaladaha aadka u xiisaha badan sababtoo ah sida ay u adkeysan karaan, adeegsadayaasha u janjeera inay dhacaan, taxaddar la'aan iyo garaacid ku dhacaan, ama cidda xirfaddooda darteed u baahan terminaal ka baxsan wadada oo iska caabiya dhammaan noocyada dhacdooyinka.
Thanks to noocan ah terminal, waad awoodi kartaa iska iloobo nasashada ama dhaawaca sida ku dhici laheyd taleefannada kale ee caadiga ah ama aan si sax ah ugu istaagin iska caabintooda. Intaa waxaa sii dheer, iyagoo culus oo mug weyn leh, moobiilladani sidoo kale waxay u muuqdaan inay leeyihiin astaamo xoog leh oo la xoojiyay oo aan suurta gal ka noqon doonin moodellada leh astaanno caato ah, sida is-maamul-weyne aad u weyn oo aan hoos ku falanqeyn doonno.
1 Astaamaha farsamada KingKong 5 Pro
1.1 Ilaalinta, naqshadeynta iyo muujinta
1.2 Nidaamka hawlgalka iyo softiweerka
2 Ku saabsan CUBOT
Astaamaha farsamada KingKong 5 Pro
El CuBOT KingKong 5 Pro Waxay degtaa Maarso 19, waxayna ku sameysaa xoog iyo guux weyn, oo leh astaamo aad u layaab leh. Intaas oo keliya kuma haysto guryaha adag iyo kahortaga naxdinta iyo wakiilada kale ee dibadaWaxay sidoo kale qarineysaa qalab aad u xiiso badan iyo softiweer. Xitaa intaa ka sii badan haddii qiimaha korantadan la tixgeliyo, taas oo ah mid la awoodi karo.
inta u dhaxaysa waxyaabaha muhiimka ah mobilkaan waxaad ka heleysaa:
Ilaalinta, naqshadeynta iyo muujinta
Waxay leedahay naqshad soo jiidasho leh, oo taasna leh guryaha adag Iyada oo leh ilaalin iyo suuf caag ah si loo nuugo saamaynta iyadoon waxyeello u geysan qalabka. Haddii aad eegto qeybta dambe, waxay leedahay saameyn kaarboonka kaarboon kaas oo siinaya dareen soo jiidasho iyo isboorti leh. Dabcan, ha fileynin khafiifnimo, maadaama kiisku uu aad u qaro weyn yahay sida caadiga ah ee noocan ah boosteejooyinka adag.
Sidoo kale wuu yimaadaa laga ilaaliyo biyaha iyo siigada, iyadoo la raacayo shahaadooyinka IP69K, taas oo ah, tan ugu sarreysa qaybteeda, taas oo ka ilaalinaysa xitaa habaaska ugu fiican iyo sidoo kale biyaha. Lambarka 6 wuxuu muujinayaa inuu ka badbaado walxaha adag, sida boodhka, halka 9K ay muujineyso inay ka hortag u tahay biyaha. Waxay ka badbaadi kartaa biyo hoosaadka hoosta iyada oo aan waxyeello gaarin, iyo sidoo kale diyaaradaha uumiga iyo kuwa cadaadiska badan leh.
Haddii taasi aysan kugu filneyn, KingKong 5 Pro sidoo kale waa layaab isagoo la kulmaya heerka militariga Mareykanka MIL-STD-810, taas oo lagu guuleysto oo keliya haddii ay ka gudubto tijaabooyin taxane ah iyo xaaladaha deegaanka shaybaarka si ay ugu shaqeyn karto xaaladaha daran.
Mana iloobayo shaashadda, taas oo ah guddi taabashada LED-ka iyo jaantus 6.1 ”, taas oo ah cabbir aad u fiican.
Nidaamka hawlgalka iyo softiweerka
Ayaa la socda Android 11 OEM horay loo rakibay, laakiin aan lahayn wax UI ama barnaamijyo xanaaq leh. Wax kasta oo nadiif ah si aad uga bilowdo meel hoose si aad u dhisto jawigaaga shaqada. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah tartamayaasha adag ayaa wali isticmaalaya Andorid 10, taas oo ah khasaaro cad marka la barbar dhigo KingKong 5 Pro, oo bixisa dhammaan kartida, shaqooyinka iyo amniga qaabkan cusub. Xaqiiqdii, Android 11 way kafiican tahay xagga asturnaanta iyo fudeyd marka loo eego kuwii kahoreeyay, ee adeegsadayaashu qadarin doonaan.
The Cubot KingKong 5 Pro wuxuu ku yimaadaa qalab aad u awood badan, in kastoo ma ahan tan ugu horumarsan ka fog Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ka mid ahayn kuwa raadinaya mobiil loogu talagalay ciyaaraha ama waxqabadka sarreeya, waxa ay isku dareyso ayaa kugu filnaan doona. Xaqiiqdii, haddii ay tahay mobilkaaga labaad ee shaqada, waxay noqon doontaa in ka badan intii ku filnayd.
Dhis SoC Mediatek Helio A22 oo ay soo saartay shirkadda TSMC oo leh mid ka mid ah teknolojiyadda semiconductor ee ugu horumarsan warshadaha, in kasta oo ay wali ku xidhan tahay 12nm node maadaama ay tahay 2018 chip.
Habka MT6761 wuxuu isku darayaa 64-bit processor, oo leh 4 ARM cores Cortex-A53 ee 2Ghz, iyo sidoo kale Power VR GE8320 GPU. SKU-daani waxay la timid 4GB oo ah LPDDR RAM iyo 64GB oo keydinta gudaha ah. Meel ku filan isticmaalayaasha badankood.
Waxay kaloo leedahay kamarad weyn (gadaal) leh laba dareemayaal 48MP ah. Intaa waxaa dheer, dareeraha waxaa soo saaray Sony, kaas oo dammaanad qaadaya tayadiisa. Xaaladda hore, ee sawirada, waa 25MP. Dhinaca kale, oo aanaan ka tagayn qaybta multimedia, waa inaan sidoo kale iftiiminaa shaqada cajiibka ah ee ay ku qabteen afkooda laba-maqalka ah, markii ugu horreysay ee Cubot ay aad ugu shaqeyso si ay u horumariso codka, si ay uga dhigto mid aad u macquul ah, oo leh mug, iyo buuq la'aan.
Taas waa in lagu daraa tiisa isku xirnaanta heer sare, oo leh NFC oo loogu talagalay Google Pay, GPS-ku ku dhisan yahay, GLONASS, BEIDOU, iyo Galileo, markaa jidka haku luminin ...
Dhammaan qalabkaas iyo isku xirnaanta KingKong 5 Pro waxay u baahan yihiin awood. Tamarta waxaa bixiya baytar Li-Ion ah oo awood badan oo leh awood aad u weyn, xoogaa yarna leh 8000mAh, si ay u siiso is-maamul aad u sarreeya qalabkan. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay Cubot, waxay ku shaqeyn kartaa hal lacag oo keliya 3-5 maalmood oo buuxa, taas oo aad uga sarreysa taleefannada kale ee caadiga ah.
Ku saabsan CUBOT
KUBOT waa soo saare taleefannada casriga ah ee wata nidaamka hawlgalka ee Android, oo leh sanduuq adag, qiime jabanna leh. Xarunta shirkaddu waxay ku taal Shiinaha, halkaasna waxay ka samaystaan ​​oo ay ka soo saaraan terminaal noocan oo kale ah kaas oo noqon kara ikhtiyaarka ugu fiican ee ranjiyeyaasha, bulukeetiyeyaasha, naqshadayaasha, dhagaxleyda, nijaarrada, iyo xirfadaha kale ee ay kuuskuus iyo dhicitaanku noqon karaan amarka maalinta .
Horraantii 2012, waxay bilaabeen inay iibiyaan moodooyin loo arko inay yihiin garaacis kuwa tayo liita leh. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, boodboodka tayada waxay ahayd muhiim. Iyagu mar dambe ma aha isla tiirarkii hore ee la soo dhaafay, illaa iyo 2020-kii, tayada ayaa ka mid ah wanaaggooda.
Dhinaca kale, aaladda noocan ah sidoo kale waxay leedahay faa iido kale, taasina waa in CUBOT uu horay u sii rakibo Android nadiif ah mobilka, iyadoon lahayn lakabyada iswaafajinta (UI) ee lagu qadariyo moodellada qaarkood oo qof walba uusan jeclayn, ama uusan barnaamijyo horay loo sii rakibay oo aan loo baahnayn. Taasi waa, qaabkan noocan ah waxaad illoobi doontaa bloatware ama waxyaabaha qarxa, si aad u heli karto mobiil shaqsiyeed oo aad jeceshahay.
Nooca CUBOT wuxuu difaacay isgaarsiintiisii ​​ugu dambeysay taas isticmaalaha ugu dambeeya waa mulkiilaha keligiis ah casriga ah, sidaa darteed isaga iyo isaga kaliya ayaa xaq u leh inuu doorto codsiyada. Wax aan kiiska ahayn noocyada badankood. Intaa waxaa dheer, noocyadan ayaa xayiraya barnaamijyadan noocan oo kale ah oo aan la saari karin, haddii aad mooyee moobiilka.
Dabcan, inay yihiin mobiillo adag, noocyadan ayaa had iyo jeer laga filayaa inay keenaan waxa ay ballanqaadayaan. Sidaa darteed, ka xirmooyinka iyo iska caabbintaSidoo kale heerarka tayada ee alaabada CUBOT, sida KingKong 5 Pro, ma niyad jabaan. Badhanadiisa, iskuxirayaasheeda, ama shaashadda waxay marayaan tijaabo xirasho farsamo oo adag, iyo waliba waxqabad. Natiijadu waa taleefan gacmeed tayo leh oo qiimo jaban.
Iyo haddii taasi ay kuugu muuqato wax yar, moodooyinka ugu dambeeyay, sida KingKong 5 Pro, CUBOT ayaa doortay baytariyada laga saari karo, sidii hore. Xilligan, soo saarayaal badan ayaa iyaga dhex gala oo aan laga laaban karin, waana arrin ka dhigaysa in dad badan oo isticmaala ay quustaan. Haddii aad ka mid tahay kuwa aan taas jeclayn, waxaad dooran kartaa CUBOT, si aanad ugu xirnayn adeegga farsamada haddii cunsurkani jabo ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » KingKong 5 Pro wuxuu leeyahay dhul xoog leh, oo leh ismaamul weyn iyo iska caabin
33-da kulan ee ugu wanaagsan RPG ee loogu talagalay Android